FAQs - GUODA (Tianjin) sainzi uye tekinoroji kuvandudza Inc.
Mitengo yedu inochinja zvichienderana nemutengo wedu uye nharaunda yekunze. Ndokumbira kuti utibate isu kuti uwane iyo yeku-kumusoro-ku-pricelist uye nerumwe ruzivo.
Tine zvishoma odha yakawanda yemitemo yepasirese, asi iyo nhamba chaiyo haina kugadziriswa zvinoenderana nerudzi rwemabhasikoro aunoda. Nekudaro, ichiri kugamuchirwa kana iwe uchida zvidiki zvidiki kune zvekutengesa. Ingo taura nesu kuti uwane rumwe ruzivo rwakadzama nezve yako yakatarwa mabhasikoro! Isu tinofara kutaura newe.